Philisi Checkweigher CMC-1200 - China Halo Pharmatech Co., Ltd
Oluzenzekelayo philisi Metage ngezigaba Machine (CMC)
Ekuvelisweni njengezingxobo, ukuhla zemilinganiselo philisi ngokuqhelekileyo kwenzeka phantsi umsa koluntu, umatshini, izinto, iindlela kunye nokusingqongileyo. Ezinye njengezingxobo bayaphuma kuluhlu engabonisi umngcipheko ophezulu kumgangatho apho kufuneka zibonwe "imveliso eyingozi". Indlela ukujongana iimveliso ezininzi yingozi kusoloko yintloko yesebe yolawulo lomgangatho kunye nesebe yemveliso.
CMC (oluzenzekelayo philisi Metage ngezigaba Machine) umlinganiselo njengezingxobo ngabanye, ukwahlula ukuba ibe yimisebenzi elungileyo kwaye ongandamkeliyo ngokutsho uluhlu ubunzima kwangaphambili. Esebenza ngokupheleleyo ngempumelelo phezulu, kunciphisa iindleko yaye inceda ukuphucula umgangatho capsule.
Ngelo xesha, ukusebenza zomsebenzi CMC series angandiswa ezingenakuphela kunye indlela yayo yendalo yokusebenza - "isakhiwo ezisenokwandiswa unit" yaye "uqhagamshelwano engenasiphelo ngaxeshanye". Ngoko ke, oko kuhlanganiswa nawuphi na umatshini philisi ukuzaliswa ukuhlolisisa zonke isingxobo ukusuka kwimveliso.
400 njengezingxobo / min
800 njengezingxobo / min
1200 njengezingxobo / min
n * 400 njengezingxobo / min
Isebenza philisi Size
Previous: Capsule Separating Machine , Capsule Opening and Powder-taking Machine (CS5 )
Okulandelayo: Philisi Checkweigher CMC-800
Ezichanekileyo philisi esikalini
Oluzenzekelayo philisi ngezigaba Machine
Icebo philisi Ukuhlolwa
philisi Uhlolo Machine
Control Quality philisi
philisi Ukuhlela Machine
Philisi Machine esikalini
philisi Weight Checker
Philisi Weight Ihlola Machine
philisi Weight Control
Philisi Weight yokuhlola
High Precision philisi Checkweigher
Speed ​​High philisi Checkweigher
Industry-Ukukhokela philisi Checkweigher
Pharmaceutical philisi Equipment
Pharmaceutical philisi Machine